🥇 ▷ Meizu 16 iyo 16 Plus waxay aad ugu egyihiin sidii la filayay: qalabka shaashadda sawirka faraha marka la soo bandhigo labada (sawir) ✅
Meizu 16 iyo 16 Plus waxay aad ugu egyihiin sidii la filayay: qalabka shaashadda sawirka faraha marka la soo bandhigo labada (sawir)
Warar dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee taxanaha ah ee Meizu 16, oo toddobaadyadii la soo dhaafay had iyo jeer udub dhexaadka u ahaa wararka xanta ah. Thanks to cusub bartilmaameed ka soo muuqday AnTuTu iyo qalin qalin oo ay daabacday maamulaha shirkadda, maanta waxaan haynaa xaqiijinno kale oo la xiriiraqalabka oo ay adeegsatay shirkadda cusub ee ugu sarreysa shirkadda Shiinaha, taasoo isu diyaarinaysa inay noqoto heerka ugu sareeya.
Qaabka loo wadaagayo shabakadaha bulshada by Huang Zhang, aasaasaha iyo maamulaha Meizu, wuxuu dejinayaa walaaca kuwa ka rajeeyay kala duwanaansho muhiim ah hoodlaha, gaar ahaan xaqiijinta: akhristaha loogu talagalay Faraha faraha shaashadda hoose waa inay kujirtaa Meizu 16 iyo Meizu weyn 16 Plus, waxayna noqon laheyd dareemaye “shaashad buuxda“.
Xaqiijinta qalabka kale waxay ka yimaadaan astaamaha AnTuTu, taas oo si sax ah ugu tilmaami doonta labada moodel ee taxanaha 16. Xogta aaladdu waxay si cad u xustay jiritaanka SoC Qualcomm Snapdragon 845, la 6 GB of RAM e 128 GB ee xasuusta gudaha. Shaashadda labada qalabba waxay leedahay xalka HD + Full (1,080 x 2,160 pixels), halka nidaamka loo adeegsado uu yahay Android 8.1 Oreo.
AKHRISO: Meizu 16 Plus wuxuu ka weynaan doonaa Oppo Find X
Haddii kuwa cusub Meizu 16 run ahaantii sidan oo kale ma noqon doontaa qancin? Inta laga sugayo xaqiijinta rasmiga ah ee ugu dambeysa, oo imaan doonta waqtiga la soo bandhigayo, noo sheeg aragtidaada ee faallooyinka.
Via: ReaMeizu, GizmochinaXigasho: IThome